Where ( eg. Alone, Hlaing,Yankin...) Hlaing Thar Yar Ahlone Bahan Botahtaung Dagon Dagon Seikkan Dala Dawbon East Dagon Hlaing Hlaing Thar Yar Insein Kamayut Kyauktada Kyeemyin Daing Lanmadaw Latha Mayangone Mingalar Taung Nyunt Mingalardon North Dagon North Okkalapa Pabedan Pazundaung Sanchaung Seik Gyi Kha Naungto Seik Kan Shwe Pyi Thar South Dagon South Okkalapa Tarmwe Thaketa Than Lyin Thingangyun Yankin
Welcome to Hlaing Thar Yar
Hlaing Thar Yar Township is located in the western part of Yangon, Myanmar. It is one of the biggest townships in the country and it is also the most populated township. The township comprises 20 wards and9village tracts and shares borders with Htantabin Township in the north and west, Insein Township, Mayangone Township, and Hlaing Township in the east across the Yangon River, and Twante Township in the south.
Over 9,700 businesses situated in this area, around 228,500 employees working in these respective businesses, total area 67.4 sq km (26.01 sq mi) – Density: 10,210/sq km, Total Population 687,867 people living in this township. Postal Code - 11401, 11402
Hlaing Thar Yar is the most developed of the new satellite towns founded in the 1980s. Hlaing Thar Yar Industrial Zone consisted of mostly garment and other light industries, is one of the largest industrial parks in the country. Showpiece gated communities of the wealthy like the FMI City and Pun Hlaing Garden Residences in the southeastern part of the township are the domain of the country's elite and are arguably among the best communities in the country. After Cyclone Nargis the township experiencedajump in population due to refugees.
The township is connected to other parts of Yangon across the Yangon river over the Aung Zeya Bridge and the Bayint Naung Bridge, and to Twante township over the Pan Hlaing river by the Pan Hlaing Bridge. The township has 46 primary schools, 8 middle schools and4high schools. Yangon Technological University also maintainsacampus in Hlaing Thar Yar.
လှိုင်သာယာမြို့နယ် စတင်ပေါ်ပေါက်လာပုံမှာ မီးဘေးသင့် ပြည်သူများကို ပြန်လည် နေရာချထားပေးခြင်းမှ စတင်ခဲ့သည်ဟု ဆိုရမည်။ ၁၉၈၅ ခုနှစ်၌ မရမ်းကုန်းမြို့နယ် စိန်ပန်းမြိုင် ရပ်ကွက်မှ မီးဘေးဒုက္ခသည်များကို အင်းစိန်မြို့နယ် သာယာကုန်းကျေးရွာတွင် နေရာပြန်လည် ချထားပေးရန် စီစဉ်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တဖန် ၁၉၈၉ ခုနှစ်တွင် တောင်ဥက္ကလာပမြို့နယ်၊ နှင်းဆီကုန်း သင်္ဃန်းကျွန်းမြို့နယ်၊ နာနတ်တော ကမာရွတ်မြို့နယ်တို့မှ မီးဘေး ဒုက္ခသည်များကို ပြန်လည် နေရာချထားပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ကျူးကျော်နေထိုင်သူများကို ပြန်လည် နေရာချထားပေးရန်အတွက် အင်းစိန်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု (၅)ခုနှင့် ထန်းတပင်မြို့နယ်မှ ကျေးရွာအုပ်စု (၆)ခုတို့၏ မြေဧရိယာကို မြို့ကွက်ဖော်ခဲ့သည်။ ရပ်ကွက် (၈)ခု၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၉)စုတို့ဖြင့် လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကို ၁၉၈၉ ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင် သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းပေးခဲ့သည်။ ထို့နောက် ၁၉၉၅ ခုနှစ် မတ်လတွင် ရပ်ကွက် (၂၀)ခု၊ ကျေးရွာအုပ်စု (၉)စု တို့ဖြင့် ပြင်ဆင် ဖွဲ့စည်းပေးခဲ့သည်မှာ ယခုတိုင်ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် အဆင့်မြင့် အိမ်ရာစီမံကိန်းများမှာ FMI City နှင့် Pun Hlaing Garden Residence တို့ဖြစ်သည်။
အကျယ်အဝန်း ၂၆ ဒသမ ၀၁ စတုရန်းမိုင် ရှိသော လှိုင်သာယာမြို့နယ်ကို လှိုင်မြစ်နှင့် ရွှေပြည်သာမြို့နယ်၊ လှိုင်မြစ်နှင့် အင်းစိန်မြို့နယ်၊ လှိုင်မြစ်နှင့် မရမ်းကုန်းမြို့နယ်၊ လှိုင်မြစ်နှင့် လှိုင်မြို့နယ်၊ ထန်းတပင်မြို့နယ်၊ ပန်းလှိုင်မြစ်နှင့် တွံတေးမြို့နယ်တို့ ဝန်းရံထားသည်။ လှိုင်မြစ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး အင်းစိန်မြို့နယ်သို့ ကူးရန် အောင်ဇေယျကြိုးတံတားနှင့် ရွှေပြည်သာတံတား၊ မရမ်းကုန်းမြို့နယ်သို့ ကူးရန် ဘုရင့်နောင်တံတား (၁)နှင့် (၂) တို့ကို အသုံးပြုနိုင်သည်။ ပန်းလှိုင်မြစ်ကို ကျော်ဖြတ်ပြီး တွံတေးသို့ ကူးရန် ပန်းလှိုင်တံတားကို အသုံးပြုနိုင်သည်။
အထင်ကရလမ်းမများမှာ အမှတ်(၅) လမ်းဖြစ်သည့် ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးနှင့် လှိုင်မြစ်လမ်း၊ ကျန်စစ်သားလမ်း၊ ကနောင်မင်းသားကြီးလမ်းတို့ ဖြစ်သည်။ ရန်ကုန်-ပုသိမ်လမ်းမကြီးမှ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလမ်းဆုံ၊ အောင်မြေသာလမ်းဆုံတို့သည် စက်မှုဇုန်အမှတ် ၁၊ ၂၊ ၃၊ ၄ နှင့် ၆၊ ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်တို့မှ အလုပ်သမားဦးရေ တစ်သိန်းကျော်တို့ နေ့စဉ် အလုပ်တက်ဆင်းတွင် လမ်းဖြတ်ကူးကြသည့်နေရာများ ဖြစ်သည်။ စာပို့သင်္ကေတ အမှတ်များမှာ ၁၁၄၀၁ နှင့် ၁၁၄၀၂ တို့ ဖြစ်သည်။
အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးဦးစီးဌာနမှ စာရင်းများအရ လှိုင်သာယာမြို့နယ်တွင် ၂၀၁၇ ခုနှစ် မတ်လကုန်တွင် အိမ်ခြေ (၅၇ ၇၇၀)ခု ရှိပြီး အိမ်ထောင်စု (၈၀ ၇၀၁)စု နေထိုင်သည်။ လူဦးရေမှာ (၄၁၄ ၂၀၉)ဦး ဖြစ်သည်။ လူနေရပ်ကွက်များအပြင် စက်မှုဇုန်များ အစီအရီ တည်ရှိသည်။
Business Collection Group(BCG) မှ စဉ်ဆက်မပြတ် ကောက်ခံလျက်ရှိသည့် အချက်အလက်များအရ စီးပွားရေးလုပ်ငန်း (၉ ၇၀၀)ခု ရှိပြီး လုပ်သားအင်အားစု (၂၂၈ ၅၀၀)ဦး လုပ်ကိုင်လျက် ရှိသည်။
ထင်ရှားသည့် စေတီပုထိုးများမှာ မဟာတေဇမုနိဘုရား၊ ရွှေရင်အေးဘုရားနှင့် အောင်မြေသာဘုရားတို့ ဖြစ်သည်။
ပုဂ္ဂလိကပိုင် ဟိုတယ် သုံးခု ရှိသည်။ Sky ဟိုတယ်၊ Vienna ဟိုတယ်နှင့် ရွှေပဒုမ္မာဟိုတယ် တို့ဖြစ်သည်။
လှိုင်သာယာစက်မှုဇုန်ကို စက်မှုဇုန် (၁)၊ စက်မှုဇုန် (၂) စသဖြင့် အမှတ်စဉ်ထိုးပြီး စက်မှုဇုန် (၇) အထိ သတ်မှတ်ပေးထားသည်။ လှိုင်သာယာမြို့နယ်အတွင်းရှိ အခြားစက်မှုဇုန်များမှာ အနော်ရထာစက်မှုဇုန်၊ ရွှေသံလွင်စက်မှုဇုန်၊ မွေးမြူရေးစက်မှုဇုန်၊ မြစိမ်းရောင်စက်မှုဇုန်၊ ငွေပင်လယ်စက်မှုဇုန်၊ ရွှေလင်ဗန်းစက်မှုဇုန်တို့ဖြစ်သည်။
စည်ပင်သာယာရေးကော်မတီ ဈေးများဌာနအောက်ရှိ ထင်ရှားသည့် ဈေးများမှာ ပင်လုံဈေး၊ ထွန်းသီရိဈေး၊ လှိုင်သာယာ(၁)ဈေး၊ ရွှေရင်အေးဈေး၊ အောင်မင်္ဂလာဈေး၊ ပိတောက်မြိုင်ဈေး၊ ကျန်စစ်သားဈေး၊ အောင်သုခဈေး၊ အမှတ်(၂၀) ရပ်ကွက်ဈေးတို့ဖြစ်သည်။ ထို့ပြင် ရှမ်းချောင်းကျေးရွာရှိ ရှမ်းချောင်းဈေး၊ ရေဥကံ္ကကျေးရွာရှိ ရေဥက္ကံဈေးနှင့် ဇုန်(၂)ဈေး၊ ညောင်ကျေးရွာရှိ ဇုန်(၁)ဈေးတို့သည်လည်း ထင်ရှားသည့်ဈေးများ ဖြစ်သည်။
ထင်ရှားသည့် ကုန်တိုက်မှာ ပုသိမ်-ရန်ကုန်လမ်းဘေးတွင် တည်ရှိသည့် Ocean ဖြစ်သည်။
အစိုးရပညာရေးကဏ္ဍတွင် မူလတန်းကြိုကျောင်း (၁၆)ခု၊ မူလတန်းကျောင်း (၃၂)ခု၊ အလယ်တန်းကျောင်း (၁၈)ခု၊ အထက်တန်းကျောင်း (၈)ခု ရှိသည်။
ဘုန်းတော်ကြီးသင်ပညာရေးကျောင်း (၁၆)ကျောင်း ရှိသည်။
ကျန်းမာရေးကဏ္ဍတွင် ပုဂ္ဂလိကပိုင် ပန်းလှိုင်ဆေးရုံနှင့် ထွန်းဖောင်ဒေးရှင်းဆေးရုံတို့ ရှိသည်။ နိုင်ငံပိုင်ဆေးရုံများမှာ လှိုင်သာယာဆေးရုံနှင့် ရွှေလင်ပန်း တိုက်နယ်ဆေးရုံတို့ ဖြစ်သည်။
Bayint Naung Bridge (2)
Aung Myay Tharyar Pagoda
Shwe Yin Aye Pagoda
Eastern Myanmar Hotel
Hlaing Thar Yar Demographic & Economic Activities
Total Population 687,867*
Percentage Of Urban Population 70.1%
Area (km2) 67.4**
Population Density (persons per km2) 10210.6 persons
Number Of Village Tracts 9
Population In Conventional HouseHolds 663463 472,696
Number Of Convetional Households 148,711 103,807
•In Hlinethaya Township, there are more females than males with 89 males per 100 females.
•The majority of the people in the Township live in urban areas with (70.1%).
•The population density of Hlinethaya Township is 10,211 persons per square kilometre.
•There are 4.5 persons living in each household in Hlinethaya Township. This is slightly higher than the Union average (4.4 persons).
Productions 868 161433
Retails 4252 13102
Wholesales 463 14894
Services 4159 31849
Trading 51 7274
All about Hlaing Thar Yar
: U Win Min
: U Aye Bo
: +95943056447
: U Win Maung
: +959795 188 890
: U Myat Min Thu
: +9594202 56325
Category : Car Workshops
Address : Blk 59, Rm B/9, Shwe Kantharyar Shop House,
Phones : 09-252939289, 09-440542868, 09-963568215
Address : 144, U Tayoke Gyi St., Industrial Zone (4),
Phones : 01-3685763, 01-3685764, 01-3685064, 01-3685319, 01-3685218
Category : Decorators & Decorating Materials
Address : 145, Bo Aung Kyaw St., Shwe Than Lwin Industrial Zone,
Phones : 01-3685126, 01-3685359, 09-421744368, 09-421744369